Shiinaha 2K In ka badan wax taaj oo kale wax taaj oo kale iyo alaab | Qaab Enuo
Qaab laba midab leh （2Kmold）:Laba nooc oo ah qalabka balaastigga ah ayaa lagu duraa isla mashiinka wax lagu duro, isla markaana lagu sameeyaa laba qaybood, laakiin sheyga ayaa wasakhda kaliya hal jeer. Guud ahaan, hawshan wax-ka-sameynta ayaa sidoo kale loo yaqaanwax taaj oo kale wax taaj oo kale duray, badanaa waxaa lagu dhammaystiraa hal nooc oo wasakhahaasi ah, waxayna u baahan tahay mashiin gaar ah oo laba-midab leh oo wax lagu duro ah.
Qaab dhismeedka xad dhaafka ah:Laba nooc oo ah qalabka balaastigga ah ayaan daruuri ahayn in lagu duro isla mashiinka wax lagu mudaayo isla markaana lagu mideeyo laba qaybood; ka dib marka badeecada laga soo saaro qaybo wasakh ah, waxaa la dhigayaa xirmo kale oo wasakh ah oo loogu talagalay mudista duritaanka labaad. Sidaa darteed, guud ahaan, hawshan wax-ka-qabashada waxaa badanaa lagu dhammaystiraa laba nooc oo wasakhahaasi ah, iyada oo aan loo baahnayn laba-midab oo gaar ahmashiinka wax taaj oo kale duray.